नाम को अर्थ meaning अर्थ र उत्पत्ति को आधिकारिक शब्दकोश
नामहरु को अर्थ
अंग्रेजी नाम र उपनाम
बाइबलीय केटी को नाम
प्रसिद्ध बच्चाहरु को नाम
केटाहरु को लागी बाइबलीय नाम
कुकुरहरु को लागी नाम
प्रसिद्ध कुकुर को नाम
चिहुआहुआ कुकुरहरु को लागी नाम
Pitbull कुकुर नाम
साना कुकुरहरूको लागि नाम
Bitches को लागी नाम
बिरालाहरूको लागि नामहरू
इजिप्टियन बिराला नामहरू
प्रसिद्ध बिरालो नाम
बिरालो को नाम
फूल को नाम
एना को अर्थ
पाउला को अर्थ
सारा को अर्थ
सोफिया को अर्थ
लौरा को अर्थ
अल्बा को अर्थ
नाम पत्र द्वारा
नाम को अर्थ - नाम को आधिकारिक शब्दकोश
अझै थाहा छैन तपाइँको नाम को अर्थ? के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि यो कहाँ बाट आउँछ र यसको मूल के हो? वा तपाइँ एक को आवश्यकता हुन सक्छ तिम्रो छोराको नाम?
नाम को अर्थ बाहिर figuring को लागी तपाइँको कारण को बावजूद, तपाइँ यसलाई खोज्न को लागी सबै भन्दा राम्रो पृष्ठ मा हुनुहुन्छ। मा www.significados-nombres.com हामी तपाइँलाई प्रस्ताव गर्दछौं तिनीहरूको अर्थ र मूल संग नाम को आधिकारिक शब्दकोश.
त्यो वेबसाइट मा तपाइँ धेरै नामहरु र उनीहरुको अर्थ पाउनुहुनेछ। तपाइँ पनी उत्पत्ति, इतिहास, संतहरु, साथै धेरै अन्य विवरणहरु लाई जान्न सक्षम हुनुहुनेछ। हामी तपाइँलाई प्रसिद्ध व्यक्तिहरु जो त्यो नाम छ को एक सूची प्रस्तुत।
1 तपाइँको नाम को अर्थ के हो?
2 AZ नाम लिस्टिंग
3 नाम को अर्थ वेबसाइट बाट के आशा गर्ने?
4 तपाइँ नाम को अर्थ मा के पाउनुहुनेछ?
5 बच्चा, केटा र केटी नाम को अर्थ, पुरा तरिकाले नि: शुल्क पाउनुहोस्
6 नामहरुको उत्पत्ति के हो?
6.1 ग्रीक, ल्याटिन र अंग्रेजी, नाम को मूल
7 म किन नाम को अर्थ जान्न रुचि राख्छु?
7.1 तिमी मायाको चंगुलमा परेका छौ
7.2 के तपाइँलाई थाहा छैन कि तपाइँ आफ्नो छोरालाई बोलाउन जाँदै हुनुहुन्छ?
7.3 तपाइँको नाम को अर्थ थाहा पाएर तपाइँ आफैंलाई धेरै राम्रो संग जान्न सक्षम हुनुहुनेछ
तपाइँको नाम को अर्थ के हो?
हामी संग नाम को सैकड़ों संग व्यापक सूची हरेक स्वाद को लागी। त्यहाँ स्पेनिश मा धेरै नामहरु छन् तर हामी पनी अन्य उदाहरणहरु जस्तै अंग्रेजी, फ्रेन्च, जर्मन, बास्क वा कातालान, मा केहि उदाहरणहरु दिन को लागी नामहरु प्रदान गर्दछौं।
चाहे तपाइँ एक आधुनिक नाम वा एक अधिक परम्परागत एक को लागी देख्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाइँ छोटो नाम चाहानुहुन्छ - जो केहि बर्ष पहिले धेरै फैशनेबल थिए - वा तपाइँ एक लामो नाम रुचाउनुहुन्छ, यस वेबसाइट मा तपाइँ के खोजिरहनु भएको छ पाउन सक्नुहुन्छ।
También tenemos घरपालुवा जनावरहरु को लागी थीम्ड नामहरु र जनावरहरु जस्तै कुकुरहरु को नाम वा बिरालाहरु को लागी नामहरु। यो सरल लाग्न सक्छ तर तपाइँको घरपालुवा जनावर को नाम छनौट गर्न को लागी यसको जटिलताहरु छन् किनकि धेरै मालिकहरु आफ्नो आकार को आधार मा आफ्नो साथी को नाम छनौट गर्न चाहन्छन्, तिनीहरुको छाला को रंग वा तिनीहरुको चरित्र।
तल तपाइँ एक पाउन सक्नुहुन्छ AZ बाट आदेश को नाम को पूरा सूची, यो सजिलो बनाउन को लागी तपाइँ वेब को उपयोग गर्न को लागी र चाँडै नाम तपाइँ खोज्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाइँ नाम को अर्थ को लागी तपाइँ खोज्दै हुनुहुन्छ को बारे मा सबै जानकारी पाउन चाहानुहुन्छ, तपाइँ मात्र वांछित पत्र छान्नुहोस् र यसमा क्लिक गर्नुहोस्।
AZ नाम लिस्टिंग
नाम जो A बाट सुरु हुन्छ
Vlvaro को अर्थ
एलिस को अर्थ
अल्बर्टो को अर्थ
एड्रियाना को अर्थ
एड्रियन को अर्थ
एन्टोनियो को अर्थ
Andrés को अर्थ
अलेक्जेन्डर को अर्थ
Andrea को अर्थ
नाम संग शुरू हुन्छ कि B
ब्रायन को अर्थ
Blanca को अर्थ
बारबरा को अर्थ
ब्रुनो को अर्थ
Beatriz को अर्थ
बेतलेहेम को अर्थ
बेन्जामिन को अर्थ
नाम जुन C बाट सुरु हुन्छ
क्रिस्टिना को अर्थ
क्लाउडिया को अर्थ
कारमेन को अर्थ
क्रिस्टियन को अर्थ
क्यारोलिना को अर्थ
Camila को अर्थ
कार्लोस को अर्थ
नाम संग शुरू हुन्छ कि डी
Dylan को अर्थ
डायना को अर्थ
डेभिड को अर्थ
डिएगो को अर्थ
नाम Daniel को अर्थ
नामहरु कि ई संग शुरू हुन्छ
एस्तर वा एस्तर को अर्थ
Elena को अर्थ
Enrique को अर्थ
एमिली को अर्थ
Erika को अर्थ
एम्मा को अर्थ
Eduardo को अर्थ
एलिजाबेथ को अर्थ
F बाट सुरु हुने नामहरु
Fatima को अर्थ
Fabiola को अर्थ
Fabian को अर्थ
Felipe को अर्थ
फ्रान्सिस्को को अर्थ
फर्नांडो को अर्थ
Fernanda को अर्थ
नाम संग शुरू हुन्छ कि जी
उत्पत्ति को अर्थ
ग्लोरिया को अर्थ
Gustavo को अर्थ
Guillermo को अर्थ
Gael को अर्थ
Guadalupe को अर्थ
Gabriela को अर्थ
नाम जो H बाट सुरु हुन्छ
ह्यूगो को अर्थ
हेक्टर को अर्थ
नामहरु कि म बाट शुरू हुन्छ
इसहाक को अर्थ
Ignacio वा Nacho को अर्थ
इवान को अर्थ
इसाबेल को अर्थ
Iker को अर्थ
Ian को अर्थ
नाम जुन J बाट शुरू हुन्छ
योएल को अर्थ
जेसिका को अर्थ
जेनिफर को अर्थ
जोनाथन को अर्थ
येशू को अर्थ
Javier को अर्थ
Jorge को अर्थ
जुआन को अर्थ
यूसुफ को अर्थ
नाम जुन K बाट सुरु हुन्छ
Kiara को अर्थ
Karina को अर्थ
क्याथरीन को अर्थ
Karla को अर्थ
केविन को अर्थ
करेन को अर्थ
नामहरु जुन L बाट शुरू हुन्छ
Luna को अर्थ
लुकास को अर्थ
Lorena को अर्थ
Lucia को अर्थ
लुइस को अर्थ
Lía को अर्थ
नाम जो M बाट सुरु हुन्छ
मरियम को अर्थ
मार्कोस को अर्थ
मोनिका को अर्थ
मार्टिना को अर्थ
मार्टिन को अर्थ
Miguel को अर्थ
Mateo को अर्थ
Manuel को अर्थ
नाम जो N बाट सुरु हुन्छ
With संग नाम
नोआ वा नोआ को अर्थ
निकोल को अर्थ
Nicolás को अर्थ
Natalia को अर्थ
नाम जो O बाट सुरु हुन्छ
उमर को अर्थ
ओस्कर को अर्थ
नाम जुन P बाट सुरु हुन्छ
Paulina को अर्थ
Pedro को अर्थ
पामेला को अर्थ
पेट्रीसिया को अर्थ
पाब्लो को अर्थ
Paola को अर्थ
नाम जो आर बाट शुरू हुन्छ
रोबर्टो को अर्थ
राफेल को अर्थ
Rodrigo को अर्थ
रोजा को अर्थ
रिकार्डो को अर्थ
Rocío को अर्थ
Raúl को अर्थ
नाम जुन S बाट सुरु हुन्छ
Susana को अर्थ
सिल्भिया को अर्थ
सर्जियो को अर्थ
Sandra को अर्थ
शमूएल को अर्थ
सेबास्टियन को अर्थ
सान्टियागो को अर्थ
नाम जो T बाट शुरू हुन्छ
तानिया को अर्थ
Thiago को अर्थ
नामहरु कि यू संग शुरू
Uriel को अर्थ
नाम जुन V बाट सुरु हुन्छ
विक्टर को अर्थ
Vanessa को अर्थ
विक्टोरिया को अर्थ
Valeria को अर्थ
Valentina को अर्थ
नाम जुन X बाट सुरु हुन्छ
Ximena को अर्थ
नाम जुन Y बाट सुरु हुन्छ
Yesenia को अर्थ
नामहरु कि Z बाट शुरू हुन्छ
Zoe को अर्थ
नाम को अर्थ वेबसाइट बाट के आशा गर्ने?
यस पृष्ठमा हामी मात्र तपाइँलाई प्रस्ताव गर्न जाँदै हुनुहुन्छ तपाइँको नाम को अर्थ। हामी नेट मा एक सन्दर्भ वेबसाइट हो, तपाइँ मात्र एक साधारण अर्थ को तुलना मा अधिक जानकारी दिन को लागी सक्षम हुनुहुन्छ।
तपाइँ नाम को अर्थ मा के पाउनुहुनेछ?
उत्पत्ति। तपाइँको नाम संग जोडिएको कथा के हो? व्युत्पत्ति के हो? के तपाइँ जान्नुहुन्छ कि भाषा को जराहरु बाट आउँछ? यदि तपाइँ तपाइँको नाम को बारे मा अधिक जान्न चाहानुहुन्छ, यो इतिहास मा यसको मूल को बारे मा अध्ययन शुरू गर्न अनिवार्य हुनेछ।
व्यक्तित्व। के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ चरित्र को प्रकार तपाइँ तपाइँको नाम अनुसार हुनु पर्छ? के तपाइँ मा रोमान्टिकवाद हावी छ? के तपाइँ तपाइँको नाम मा आधारित मान्छे को लागी एक आत्मीयता हुनु पर्छ? के तपाइँ माया प्रेममा भाग्यशाली हुनुहुनेछ? यस वेबसाइट मा तपाइँ आफ्नो गन्तव्य को बारे मा अधिक जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
सेन्टोरल। के तपाइँलाई थाहा छ जब यो तपाइँको संत हो, वा एक साथी वा एक विशेष व्यक्ति को हो? यहाँ तपाइँ यो स्पष्ट र तपाइँको सन्त को सही मिति जान्न सक्नुहुन्छ।
एउटै नाम बाट प्रसिद्ध। के प्रसिद्ध व्यक्तिहरु तपाइँको नाम मा राखिएको छ? के तपाइँ तपाइँको अर्को बच्चाको नाम तपाइँको मूर्ति पछि राख्न चाहानुहुन्छ? त्यहाँ धेरै लोकप्रिय नामहरु छन् कि तपाइँ आफैंमा आधार बनाउन सक्नुहुन्छ ... पनि प्रसिद्ध मानिसहरुको नाम को उपयोग गरीरहेछ कि सधैं धेरै फैशनेबल छ।
कम (hypocoristic): उनीहरु ती नामहरु हुन् कि निकटता को एक प्रतीक को रूप मा प्रयोग गरीन्छ, यहाँ सम्म कि नजिकका मानिसहरु लाई सामान्यतया यो नाम भन्दा धेरै प्रयोग गर्दछन्। यहाँ तपाइँ सबैभन्दा प्रमुख र स्पेनिश मा सबै भन्दा साधारण पाउन सक्नुहुन्छ।
जिज्ञासा। उचित नाम मात्र उनीहरु को पछाडि एक पूरा ईतिहास राख्दैनन्, तर पनी पहेली को सबै प्रकार छ कि हामीलाई हांसिलो बनाउनेछ। केहि समय को शुरू बाट पैतृक अनुष्ठान को हिस्सा भएको छ, उनीहरु देवताहरु, परिदृश्यहरु, शहरहरु संग जोडिएका छन् र मानवता को महान कामहरु लाई आकार दिन को लागी प्रेरणा भएको छ। यस वेबसाइट मा, तपाइँ पनि यो जानकारी बाहिर जान्न को लागी सक्षम गर्न को लागी meaningados-nombres.com को लागी सक्षम हुनुहुनेछ।
के तपाइँको नाम अन्य भाषाहरुमा अनुवाद गरीएको छ? के तपाइँ यो एक अंग्रेजी संस्करण छ थाहा छ? तपाइँ कसरी इटालियन, फ्रेन्च ... वा यहाँ सम्म कि रूसी मा लेख्नुहुन्छ? के तपाइँ सोच्नुभएको छ कि तपाइँ अर्को भाषामा राम्रो नाम मनपर्छ? हामी यो तपाइँको लागी सजिलो बनाउँछौं ताकि तपाइँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।
के तपाइँको नाम तपाइँको साथी संग मिल्छ?। त्यहाँ नामहरु छन् कि अरु संग सम्बन्धित छन्, जबकि अन्य बिल्कुल विपरीत छन्। हामी धेरै सचेत हुनु पर्छ कि एक व्यक्ति कम या कम मिल्ने माया मा गिरन को लागी, एक सम्बन्ध मा प्रवेश गर्न को लागी वा थाहा छ कि यदि उनी वास्तव मा वफादार छन्। यो हुन सक्छ कि एक व्यक्ति अधिक वा कम निर्भर छ, जबकि अर्को को लागी अधिक सुविधा बेवफा हुन को लागी छ, र यो नाम बाट थाहा हुन सक्छ।
संख्यात्मक। नामहरु संख्या संग सम्बन्धित छन्, र यी संख्या भाग्य र भाग्य संग सम्बन्धित छन्। तपाइँ यी विवरणहरु लाई बिर्सनु हुँदैन।
यहाँ हामी तपाइँलाई के भन्दै छौं त्यसको केहि उदाहरणहरु छन्: Pedro को अर्थ y सोफिया को अर्थ.
बच्चा, केटा र केटी नाम को अर्थ, पुरा तरिकाले नि: शुल्क पाउनुहोस्
हामी पहिले नै टिप्पणी गरिसकेका रूपमा, यो सम्भव छ कि तपाइँ एक नाम को अर्थ को लागी थाहा पाउन को लागी यदि यो हाम्रो भावी बच्चा को लागी सबैभन्दा उपयुक्त छ। हामी धेरै जान्न को लागी यो सही छ भने जान्न को लागी धेरै जानकारी प्राप्त गर्न मा रुचि हुनेछ।
हामी एक नाम धेरै मनपर्छ, तर हामी यसको मूल, यसको जरा, र यो जानकारी तपाइँ आफ्नो दिमाग परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर थाहा छैन। "टेबल मा" जानकारी भएकोले, यो निर्णय गर्न सजिलो हुनेछ।
पत्ता लगाउ सही नाम यो सजीलो निम्न सूची को लागी धन्यवाद छ:
बच्चाका नामहरू। यहाँ तपाइँ बच्चाहरु को नाम पाउन सक्नुहुन्छ, हाम्रो देश र विदेश मा सबैभन्दा लोकप्रिय देशहरु मा, ती जो एक प्रवृत्ति बनेको छ, दुर्लभ छ कि पहिलो पल, आधुनिक, मौलिक, रचना बाट हाम्रो ध्यान खिच्नेछ।
मूल र सुन्दर बच्चाहरु को नाम। यदि तपाइँ पहिले नै थाहा छ कि तपाइँको बच्चा एक केटा हुन जाँदैछ, तब तपाइँ यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र मूल नामहरु पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाइँ असामान्य विकल्प को एक चयन पाउनुहुनेछ, तिनीहरुको अर्थ संग। हामीसँग पनि छ केटाहरु को लागी बाइबलीय नाम y बच्चाहरु को लागी प्रसिद्ध नामहरु.
राम्रो केटीको नाम। र यदि तपाइँ पहिले नै थाहा छ कि यो एक केटी हुन जान्छ, यहाँ तपाइँ विचारहरु कि तपाइँ तपाइँको निर्णय गर्न को लागी अनुमति पाउन सक्नुहुन्छ। तपाइँ अधिक वा कम आधुनिक नामहरु पाउन सक्नुहुन्छ, एक विशेष अर्थ संग, दुर्लभ, बाइबलीय, यसको अर्थ, आदि संग।
अन्य भाषाहरु मा नामहरु। यदि तपाइँ स्पेनिश मा एक रोचक नाम पाउन सक्नुहुन्न, शायद हामी अर्को भाषा मा एक को लागी जान सक्छौं। अर्को भाषा मा एक नाम छनौट गर्न को लागी यो लाग्छ भन्दा धेरै जटिल छ, किनकि हामी सही अर्थ, वा अर्को भाषा मा अनुवाद थाहा छैन। यहाँ तपाइँ एक राम्रो सूची पाउन सक्नुहुन्छ अंग्रेजी नाम र उपनाममा catalan, चीनी, जापानी, हिब्रू र धेरै अन्य भाषाहरुमा। सम्बन्धित श्रेणी मा क्लिक गरेर, ती सबै को प्रदर्शन गर्न को लागी शुरू हुनेछ।
घरपालुवा जनावरहरुको नाम। यो पनी जान्न को लागी धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि कसरी एक घरपालुवा जनावर को नाम छनौट गर्न को लागी, केहि भन्दा धेरै किनभने यो एक हो कि तपाइँ आफ्नो जीवन भर प्रयोग गर्नुहुनेछ। यो खण्ड तपाइँलाई खोज्न मद्दत गर्नेछ कुकुरहरु को लागी नाम, खरायो, बिरालोहरु, वा कुनै अन्य जनावर तपाइँसँग छ। तपाइँ धेरै विचारहरु कि तपाइँ तपाइँको सानो साथी को विशेषताहरु अनुसार एक आदर्श नाम प्राप्त गर्न को लागी अनुमति दिनेछ प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। हामीसँग महिला समकक्षहरु पनि छन् bitches को लागी सबै भन्दा राम्रो नाम y बिरालाहरु को लागी नाम.
नामहरुको उत्पत्ति के हो?
सत्य यो हो कि कुनै नयाँ नाम आविष्कार गरिएको छैन। हामी भन्न सक्छौं कि नाम को विशाल बहुमत धेरै, धेरै बर्ष पहिले आविष्कार गरिएको थियो। के हामी आज भेट्टाउँछौं ती नामहरु को एक भिन्नता हो, यद्यपि त्यहाँ केहि छन् कि उनीहरु को सम्पूर्णता मा हामीलाई आउँछ।
तपाइँ सोच्न सक्नुहुन्छ कि नाम को अर्थ महत्वपूर्ण छैन, तर यो साँच्चै हो। एक राम्रो उदाहरण को नाम हो सिल्भियाको, यो एक जो "असाधारण महिला" भन्छन् र ल्याटिन मा यसको जरा छ।
ग्रीक, ल्याटिन र अंग्रेजी, नाम को मूल
वर्तमान नामहरु को अधिकांश ग्रीक, ल्याटिन वा एंग्लो-स्याक्सन जराहरु छन्। पहिलो मा तपाइँ यसलाई महत्व दिन सक्नुहुन्न, तर वास्तवमा यो गर्छ, र धेरै। उदाहरण को लागी, नामहरु एलेना को अर्थ को सबै दायरा को बीच एक सबैभन्दा रोचक छ, किनकि यसको मतलब छ "असाधारण", एक शब्द जुन ल्याटिन बाट आउँछ।
नाम को अर्थ को महत्व बुझ्न को लागी अर्को राम्रो उदाहरण मा पाईन्छ Andrés को अर्थ यो ग्रीक मा जरा छ र "साहसी, सम्मानजनक।"
पछिल्लो उदाहरण को रूप मा, रिकार्डो को नाम, यसको मतलब "राजसी राजा", र यसको जराहरु जर्मनिक छन्।
यदि तपाइँ अनुसन्धान गर्न चाहानुहुन्छ नामहरुको अर्थ तपाइँको आफ्नै मा, तपाइँ को लागी कुरान वा बाइबिल को लागी पनी कुनै विकल्प छैन, र हेर्नुहोस् कि उनीहरु कसरी समय को बहाव संग बग्यो। अब, त्यहाँ पनी धेरै वर्तमान नामहरु छन् कि त्यस्ता पुराना रेकर्डहरुमा देखा पर्दैन। उदाहरण को लागी, को नाम Iker मूल रूप बाट बास्क देश बाट.
यदि तपाइँ व्युत्पत्ति र नाम को उत्पत्ति जान्न चाहानुहुन्छ, यो कुरान वा पवित्र बाइबल जस्तै होलोग्राफ मा फिर्ता जान आवश्यक छ। जे होस्, त्यहाँ नामहरु छन् कि अधिक आधुनिक छन्, किनकि उनीहरु पहिलो पटक को लागी धेरै समय पहिले प्रयोग गरीएको थिएन, Iker को रूप मा, जो बास्क देश मा प्रयोग गर्न शुरू भयो।
म किन नाम को अर्थ जान्न रुचि राख्छु?
के यो साँच्चै धेरै रोचक जान्न को लागी हो नाम को अर्थ? सत्य यो हो कि धेरैजसो मानिसहरु सोच्छन् कि छैन, त्यो नाम मात्र हो।
अब, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्दा यो लाग्छ, र त्यहाँ धेरै कारणहरु छन् कि यो देखाउँछन्। यहाँ हामी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण को केहि अध्ययन।
सायद तपाइँलाई अचम्म लाग्यो के वास्तव मा नाम को अर्थ जान्न को उपयोग छ… तब तपाइँ भाग्यमा हुनुहुन्छ किनकि धेरैजसो मानिसहरु सामान्यतया आफ्नो सम्पूर्ण जीवन मा यसको बारे मा सोच्दैनन्।
तपाईं मा फस्नुभयो पञ्जा मायाको
मुख्य कारण यो हो कि एक सामान्यतया खोजिएको छ नाम को अर्थ यो किनभने एक नयाँ व्यक्ति हाम्रो जीवन मा प्रवेश गरेको छ र हामी यो मनपर्छ। यस अर्थ को माध्यम बाट हामी उहाँ / उनको बारे मा अधिक जान्न चाहानुहुन्छ। हामी जान्न को लागी कसरी तपाइँको व्यक्तित्व हो र यदि हामी मिल्दोजुल्दो छ वा छैन।
मूल र नाम को अर्थ को लागी धन्यवाद हामी पत्ता लगाउन सक्छौं कसरी माया मा पागल हुन त्यो व्यक्ति को लागी कि हामी धेरै मन पराउँछौं। हामी जान्दछौं कि हाम्रो दिमागमा रणनीति काम गर्न जाँदैछ, वा यदि हामी एक राम्रो को लागी हेर्नु पर्छ।
माया मा केहि पनी जान्छ, र एक व्यक्तिको व्यक्तित्व को बारे मा अधिक जान्न को लागी, नाम को अर्थ को लागी धन्यवाद, धेरै भन्दा धेरै मद्दत गर्न सक्छौं। तपाइँ हामीलाई यो पनि बताउन सक्नुहुन्छ कि तपाइँको चरित्र कस्तो छ वा यो अतीत मा भएको छ।
कल्पना गर्नुहोस् कि तपाइँ एक मानिस लाई बहकाउन चाहानुहुन्छ र उसको नाम को अर्थ शक्ति, आकर्षण र प्रलोभन लाई दर्शाउँछ। यो सम्भव छ कि, यी विशेषताहरु लाई ध्यान दिएर, यो उहाँ हो जसले तपाइँलाई बहकाउँछ। जे होस्, त्यहाँ पनी केहि नामहरु छन् कि, उनीहरुको अर्थ अनुसार, संकेत गर्न सक्छन् कि विजय को कठिनाई उच्च छ।
जे भए पनि, नाम को अर्थ जान्न को लागी तपाइँ यसको अनुकूलता जान्न मद्दत गर्दछ.
के तपाइँलाई थाहा छैन कि तपाइँ आफ्नो छोरालाई बोलाउन जाँदै हुनुहुन्छ?
एक नाम को अर्थ को लागी खोज हामीलाई मद्दत गर्न सक्छ हाम्रो भावी छोरा को लागी सही नाम o छोरी, विचारहरु को एक सूची छ जसमा हामी हाम्रो निर्णय गर्न सक्छौं।
हामी एक महत्वपूर्ण निर्णय को बारे मा कुरा गरीरहेका छौं, र यो हो बच्चा सधैंको लागी त्यो नाम बोक्नेछयो तपाइँको व्यक्तित्व परिभाषित गर्दछ र पनी तरीकाले संसार तपाइँलाई देख्न जाँदै हुनुहुन्छ।
न केवल हामी "यो कसरी लाग्दछ" द्वारा निर्देशित हुनु पर्छ, तर हामी पनि उत्पत्ति, इतिहास, व्युत्पत्ति, जरा, साथै कुनै अन्य सम्बन्धित विवरण को अध्ययन गर्नु पर्छ। तपाइँले यो पनि विश्लेषण गर्नु पर्छ कि कथा मा कुन पात्रहरु उही तरीकाले नाम दिईयो।
के उनी साहसी, ईमानदार, फलाम मूल्यहरु, शर्मीला, स्नेही, अन्तर्मुखी, बहिर्गमन, मिलनसार हुनेछन्? एक राम्रो उचित नाम फरक पार्न सक्छ।
एक धेरै सामान्य विकल्प एक को लागी छनौट गर्न को लागी हो बाइबल नाम। यस अर्थमा, बाइबल को चरित्र मा एक नजर छ कि त्यो नाम को जीवन, साथ साथै यसको अर्थ लाई दिनुभयो।
यस वेबसाइट को माध्यम बाट तपाइँ धेरै धेरै सुझावहरु छन् कि तपाइँ निर्णय गर्न मा मदद पाउनुहुनेछ।
तपाइँको नाम को अर्थ थाहा पाएर तपाइँ आफैंलाई धेरै राम्रो संग जान्न सक्षम हुनुहुनेछ
के थाहा छ तपाइँको नाम के मतलब तपाइँलाई आत्म-खोज को यात्रा लिन मद्दत गर्दछ आफ्नो बारेमा थप जान्नुहोस्, तपाइँको शक्तिहरु, तपाइँको कमजोरीहरु, साथ साथै तपाइँको व्यक्तित्व को कुनै अन्य लक्षण जान्न को लागी।
यो प्रभावशाली छ कि कसरी मानिसहरु अवाक छन् जब उनीहरु उनको नाम को अर्थ जान्दछन्, र यो हो कि उनीहरु साँच्चै उनको व्यक्तित्व देख्छन्।
यदि तपाइँ को हुनुहुन्छ को बारे मा सचेत हुनुहुन्छ, तपाइँ आफैंलाई त्यस तरीकाले स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ।
अन्ततः, अर्को कारण किन तपाइँ नामहरु को अर्थ मा रुचि राख्नुहुन्छ कि तपाइँ आफैंलाई अझ राम्रो जान्न चाहानुहुन्छ। अर्थ सिक्न तपाईं भित्र समृद्ध हुनेछ, हामी सबै कम्तीमा एक पटक हाम्रो जीवन मा यो को लागी हेर्नु पर्छ।
यदि तपाइँ तपाइँको लक्ष्यहरु लाई प्राप्त गर्न को लागी पछाडि पछाडि झुकाव राख्नुहुन्छ, तपाइँ अरु को तुलना मा फरक महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, कोहि कोहि तपाइँ को रूप मा धेरै प्रयास मा राख्नुहुन्न। यो हुन सक्छ कि, तपाइँको नाम अनुसार, तपाइँ लगनशील हुनुहुन्छ, र तपाइँसँग गुणहरु छन् कि अरु कसैसँग छैन
जसरी तपाइँ प्रमाणित गर्नुभयो, यदि कोहि जान्दछन् नामहरुको अर्थ, तपाइँ यो वेबसाइट भन्दा राम्रो ठाउँ पाउनुहुन्न अर्थ- names.com। तपाइँ सित्तैमा यो सबै डाटा हुन सक्छ।
यदि त्यहाँ एक नाम छ कि हामी हाम्रो वेबसाइट मा छैन, हामी सिफारिश गर्दछौं कि तपाइँ यसलाई मार्फत संकेत गर्नुहोस् पृष्ठ को सम्पर्क खण्ड.
© २०२१ | अर्थ- names.com: नाम र मूल को आधिकारिक शब्दकोश | Ignacio Andújar द्वारा